Chromebooks -ka ayaa noqda kuwa la heli karo | Androidsis
Chromebooks waxay noqdeen kuwa la heli karo
Zack | | Noticias, Noocyada Android
Waa la qirayaa, tan iyo markii la siidaayay Chromebooks, iibintoodu aad uma badnayn. Chromebooks la qaadan karo oo ku jira nidaamka hawlgalka Google: Chrome OS.
Nidaamkan hawlgalku wuxuu ku saleeyaa hawlgalkiisa “daruurta”, taas oo ah, wax kasta oo aad keydsato, isticmaasho, iwm. waxaa lagu kaydiyaa meel fog internetka, server -yada Google. Tani waa wax ay dadku "dib uga laabtaan" marka ay timaado qaadista tallaabada Chromebooks.
Laakiin bal eeg Samsung ayaa tallaabo ka qaadeysa arrinta sidaas darteedna waxay diyaarineysaa khad cusub oo Chromebooks ah. Kuwani waxay la mid yihiin nuqulkii hore, kaliya leh Wifi iyo kan ugu soo jiidashada badan, qiimaheeda, maadaama ay ku kici doonto $ 350 (qiyaastii € 300).
Xusuusin ahaan, noocii hore ee Samsung's Chromebooks waxaa lagu gartaa baaxaddiisa 12.1,, dhuubnaantiisa iyo dabcan nidaamka hawlgalka Chrome OS. Astaamahani waxay ku sii jiri doonaan nooca cusub.
Chromebooks waxay iila muuqdaan wax weyn, in kasta oo laga yaabo fikradda ah in wax walba ay ku jiraan "daruur" -da internetka waa wax goor hore ah si loo wada isticmaalo. Waana in dadku ay weli "ka baqayaan" oo aysan ku kalsoonayn inay xogtooda ku haystaan ​​internetka oo aysan haysan nuqul gudaha ah.
In kasta oo fikraddan ay hubaal ahaan wax yar isu beddeli doonto illaa aan illaawno in waagii hore wax walba lagu kaydin jiray diskka adag ee mishiinka aan adeegsannay, tan iyo "Daruuraha" waa wax aad u raaxo badan oo wax ku ool ah. Ama haddii aanan kugu casuumin inaad tijaabiso, isticmaal Google Docs, ku keydso dukumiinti kasta oo daruurta ku jira oo u tag qof aad taqaan, shaqo, dugsi, iwm. Waxaad arki doontaa inay kugu kacayso wax yar (ilaa waxba, dadaal, madax -xanuun, waxba) si aad u soo ceshato dukumintigaas.
Waa kan fiidiyaha bandhigga Chrome OS:
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Chromebooks waxay noqdeen kuwa la heli karo
Waa wax iska caadi ah in Chromebooks ay wax yar iibiyeen ... Waxaa kaliya lagu iibsan karaa Pixmanía, oo ay ku jiraan nooca 3G, laakiin midkani wuxuu ka haystaa SIM movistar midna kuma jiro movistar ama pixmania way yaqaaniin sida laguu sheego waxa xogta kuu waxay yeelan doonaan ama haddii aad sim ka dhigi kartid hawl -wadeen kale ... Si ka duwan dhammaan laptopsyada kale, netbooks -ka iyo kiniiniyada, ma jirto meel aad ku arki karto oo aad ku taaban karto, taas oo aan u malaynayo inay aad muhiim u tahay in la go'aansado .... Iyada oo qaybintaan xun, sidee bay u iibinayaan?
Aniga qudhaydu waxaan rabaa inaan mid iibsado bilowgii, aad ayaan ugu kalsoonahay Chrome OS maxaa yeelay waxaan adeegsadaa Chrome 99% waqtiga kombiyuutarkayga. Laakiin waxaan ka baqayaa inaan guuro ...
Ka jawaab Luispyarts
Eeg maxay tahay waxtarka daruuriga oo dhan haddii aad tagto meel fog adiga oo aan lahayn signal guur-guura iyo Wi-Fi aad uga yar ??? Ugu yaraan waa inay dhigaan diskka SSD ama SD ama kaararka micro SD
Runtu waxay tahay inta aan ogahay, isticmaalka Chromebook ama isticmaalka Buuggayga Xusuus -qorka biraawsarka Chrome aad ugama duwana heer shaqaynaya.
Waxaan u malaynayaa in Chrome OS -gu guulaysto, waa inay isku daraan duubista khadka tooska ah ee adeegyada iyo dukumiintiyada iyo wax ka sii muhimsan ... waxay bixiyaan adeeg ka -fiirsasho Windows ama Mac, ama Linux (ama dhammaan) si ay u awoodaan inay u adeegsadaan codsi kasta kombiyuutar ... haa waxay noqon lahayd inaad haysato kombiyuutarkaaga meel kasta.
Jorte, abaabul fudud oo loogu talagalay Android-kaaga